Uru nke mkpọsa email na azụmahịa dijitalụ? | ECommerce ozi ọma
E nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ụlọ ọrụ azụmahịa dijitalụ nwere ike iji bulie ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Mana obi abụọ adịghị ya na enwere ike ịnweta ya n'ụzọ dị mfe bụ ndị mepụtara site na email ma ọ bụ email. Onyinye ha dị iche iche dị ka ị ga-enwe ike nyochaa n'okpuru.
Ihe a na-akpọ email ahịa Ejiri ya n'ihi na ọ nweghị oke iru ọtụtụ ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Site na uru ọzọ enwere ike iji ọtụtụ nzacha karịa ụdị azụmaahịa ndị ọzọ iji họrọ ndị nnabata anyị chọrọ iji nweta site na ozi anyị. Ọbụghị naanị na ọkwa mba, kamakwa n'ofe mba ụwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka mmepe ụlọ ahịa anyị ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị.
Email mkpọsa na azụmahịa dijitalụ, n'aka nke ọzọ, bụ usoro anaghị achọ itinye ego ma ọ bụ nnukwu ego iji mezuo ya. N'adịghị ka usoro ndị ọzọ na ịzụ ahịa nke oge a nke nwere ike ịchọ anyị n'oge ọ bụla iji kwado ego iji chee ụgwọ nke nkwado ndị omume ndị a chọrọ n'ịzụ ahịa n'ịntanetị.
1 Email mkpọsa: chekwaa ego na ihe onwunwe
2 Nkwalite ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị
3 Ọ bụ ọwa nwere ike ịnweta ndị ọrụ niile
4 Nzaghachi ngwa ngwa
5 Kpọọ ime ihe
Email mkpọsa: chekwaa ego na ihe onwunwe
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime uru kasịnụ nke mkpọsa nke njirimara ndị a bụ ego echepụtara enwere ike ịme na ndekọ ego nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a bụ n'ihi na mmepe ya n'ọnọdụ niile ga-adịkarị ọnụ ala karịa ụdị omume ndị ọzọ. Iji maa atụ, igbe ozi ọdịnala nke a na-eji egosipụta maka ọnụnọ nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe n'etiti ndị na-azụ ahịa. Ebe achọrọ ka akwụ ụgwọ maka ego ndị ọrụ, ihe na ọrụ ndị e debanyere aha na ndị na-eweta ngwaahịa. Ruo n'ókè na n'ikpeazụ ọ ga-ebuli mmefu ego anyị kwesịrị iji mejuo ọrụ azụmahịa a.
Mgbe n'aka nke ọzọ, enweghị ike ichefu na ụdị mkpọsa ozi email a nwere ike isi na ụlọ ọrụ anyị na ụfọdụ ngalaba ya. N'ụzọ dị otú a, mmefu nke mkpọsa ndị a ga-abụ achọghị mkpa nke ọrụ. Na-enweghị ịkwụsị n'oge ọ bụla na mmetụta ya dị mma maka ezigbo ọrụ ụlọ ọrụ.
Nkwalite ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị
Ọ dịghị obere eziokwu bụ eziokwu ahụ bụ na mgbasa ozi email nwekwara mmetụta dị mma na usoro ahịa. N'okwu a, n'ihi na ọ bụ ọwa dị ike iji kwalite ngwaahịa anyị n'ụzọ dị oke mkpa na nke ziri ezi maka ọdịmma ndị ọkachamara anyị. N'echiche a, a ghaghị imesi ya ike na sistemu a na-enye ụfọdụ uru nke anyi ga-ekpughere n'okpuru:
Ọ na - enye gị ohere nyocha akụkụ nke ịchọrọ ịche, dabere na afọ ha, ike ịzụta, profaịlụ ọkachamara ma ọ bụ okike nke ndị a. Ya mere, n'ụzọ dị otú a, ha nọ n'ọnọdụ iji bulie usoro azụmahịa a.
Nwere ike ịhọrọ ụdị mkpọsa dị iche iche iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ha sitere na izipu ozi nkeonwe na akwụkwọ akụkọ, na-agabiga ozi nke akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na ọrụ ọkachamara gị.
Are nọ n'ọnọdụ kachasị mma ịhọrọ oge ziri ezi iji zipu ọkwa ndị a na ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ma dabere na ọnọdụ ndị ọzọ dị na mpụga nke nwere ike ime ka ị ghara ịhapụ oge karịa ka ọ dị mkpa n'ezie n'okwu ndị a.
Nnukwu mgbanwe ya site na inwe ike ịhọrọ ọkwa dị iche iche nke ozi, dịka ederede, akụkọ ma ọ bụ ọdịnaya ọdịyo, n'etiti ụfọdụ kachasị dị mkpa. Na na nke ọ bụla, ha ga-adabere na profaịlụ nke ndị ahịa gị na-eweta yana kwa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-enye ha n'ikpeazụ.
Ọ bụ ọwa nwere ike ịnweta ndị ọrụ niile
Are anaghị egbochi gị azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ niile nọ na mba anyị nwere njikọ connectionsntanetị. N'echiche a, ekwesịrị ịdeba na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya nke We Are Social mere nke gosiri na ntakịrị karịa 80% nke ndị Spain na-eji Internetntanetị. Ebee, oge ọ bụla ịntanetị na-erute ọtụtụ mmadụ na email bụ otu n'ime mkpa mbụ anyị nwere mgbe ijikọ na netwọk. Nke a bụ otu n’ime ihe ndị ama ama mere email ji bụrụ otu n’ime ụzọ kacha mma iji jikọọ ndị mmadụ nwere mmasị.
Naanị ị ga-edepụta adreesị email nke aha ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke ịchọrọ izipu ọkwa ọkachamara gị. Ọ ga - abụ ọrụ siri ike karịa na mbụ, mana mgbe ahụ enwere obi abụọ niile ga - ewepụ site na ịnwe ngwa ọrụ ọhụrụ iji gosipụta ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa gị.
Kindsdị arụmọrụ ndị a, n'aka nke ọzọ, baara gị uru akwa agility na usoro a nke na - enye gị ohere mmekọrịta ka ukwuu n'etiti ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Ọbụlagodi n’ime ntakịrị oge izipụla ozi ma ọ bụ ọdịnaya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ ọrụ mmekọrịta ma ọ bụ ọwa na njedebe na-emepe ụdị ọdịnaya niile. Dịka ọmụmaatụ, ụdị, vidiyo ma ọ bụ ihe ndị a na-ege ntị. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ụdị nkwukọrịta nke na-enyere gị aka ịkọwa mmekọrịta gị na ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị n'oge ọ bụla.
Kpọọ ime ihe
Obi abụọ adịghị ya na site na email nke njirimara ndị a ọ bara ezigbo uru ịmepụta ọnọdụ a. Ma ọ bụ site na bọtịnụ ma ọ bụ njikọ ịkpọ oku ma ọ bụ site na ọdịnaya nke pụtara maka ogo ya. Iji mee ka onwe gị dị iche na asọmpi na n'ụzọ dị otú a iji nwee ike ịgbaso ọganihu na ọrụ ọkachamara gị site na oge mbụ. N'akụkụ a, ọ dị ezigbo mkpa na ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ a na-adọrọ mmasị mgbe niile. Ọ dị mma ịmịnye onwe gị n'ime akpụkpọ ụkwụ nke ndị nnata gị iji mata ndị ha ga-achọ ịnata site ugbu a gaa n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Uru nke mkpọsa email na azụmahịa dijitalụ?